နောက်ဆုံးတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သော တရားရုံးသက်သေစရိတ်နှင့် သက်သေစရိတ်ထုတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန် ချောမွေ့စေရန်တရားရုံး၏ ထင်သာမြင်သာသော နေရာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ တရားရုံးများအတွက် လိုအပ်သော သက်သေစရိတ်ကို စနစ်တကျ ဘတ်ဂျက်ချမှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးမြန်း – Yangon Hluttaw
Home / မေးခှနျးမြား / နောက်ဆုံးတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သော တရားရုံးသက်သေစရိတ်နှင့် သက်သေစရိတ်ထုတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန် ချောမွေ့စေရန်တရားရုံး၏ ထင်သာမြင်သာသော နေရာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ တရားရုံးများအတွက် လိုအပ်သော သက်သေစရိတ်ကို စနစ်တကျ ဘတ်ဂျက်ချမှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးမြန်း
နောက်ဆုံးတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သော တရားရုံးသက်သေစရိတ်နှင့် သက်သေစရိတ်ထုတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန် ချောမွေ့စေရန်တရားရုံး၏ ထင်သာမြင်သာသော နေရာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ တရားရုံးများအတွက် လိုအပ်သော သက်သေစရိတ်ကို စနစ်တကျ ဘတ်ဂျက်ချမှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးမြန်း
Ygn Editor June 21, 2019	မေးခှနျးမြား 25 Comments 376 Views
ရန်ကုန်၊ ဇွန်လ၊ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်အောင်က “နောက်ဆုံးတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သော တရားရုံးသက်သေစရိတ်နှင့် သက်သေစရိတ်ထုတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန် ချောမွေ့စေရန်တရားရုံး၏ ထင်သာမြင်သာသော နေရာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ တရားရုံးများအတွက် လိုအပ်သော သက်သေစရိတ်ကို စနစ်တကျ ဘတ်ဂျက်ချမှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ ” မေးမြန်းရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ် ဦးလှအေးက “သက်သေများအား စားစရိတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၃ တွင် ဖော်ပြထားသော စရိတ်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ၆.၉.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၂/၁၆၈/အဖရ (၁၅/၂၀၁၈)ဖြင့် သဘောတူညီချက်အရ ၁.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ တစ်နေ့လျှင် ငွေကျပ် ၄၈၀ဝိ/- နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ပေးရန် နောက်ဆုံး တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ နောက်ဆုံးတိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်သော သက်သေစရိတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန် ချောမွေ့စေရန်အတွက် ၁၃.၆.၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၂၁၂/တိုင်းဦးစီး/၂၀၁၉ ဖြင့် ရုံးအသီးသီးကို ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပေးပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရန်ပုံငွေနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် သက်သေစရိတ်အတွက် ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို ချထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ သိန်း ၁၀၀ ချထားပြီးနောက် သက်သေစရိတ် ၄၈၀၀ ဖြစ်သည့်အတွက် ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးရန် ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေ တောင်းခဲ့ပါကြောင်း၊ ငွေကျပ် ၁၈၁၀၂၄၀၀ (တစ်ရာရှစ်ဆယ့် တစ်သိန်းနှစ်ထောင့်လေးရာကျပ်) ကို ထပ်မံဖြည့်စွက် ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သက်သေစရိတ်အား ရုံးတိုင်းတွင် ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ထားပါကြောင်း၊ လိုအပ်လျှင်လည်း ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေဖြင့် ထပ်မံတောင်းခံမည်ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်စပ်မေးခွန်းအနေဖြင့် တရားရုံးများ၏ ထင်သာမြင်သာသော နေရာများတွင် သက်သေစရိတ်ကို လျင်မြန်စွာထုတ်ယူနိုင်ရန် အတွက် ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိသိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းရာ တရားသူကြီးချုပ်က ၁၃.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့က ရုံးအသီးသီးကိုစာထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရုံးအသီးသီး၏ notice Board တွင် ကြေညာပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ရနျကုနျ၊ ဇှနျလ၊ ၁၈ ရကျ၊ ၂၀၁၉ ဒုတိယအကွိမျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော နဝမပုံမှနျအစညျးအဝေး ဒုတိယနတှေ့ငျ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးရနျအောငျက “နောကျဆုံးတိုးမွှငျ့သတျမှတျလိုကျသော တရားရုံးသကျသစေရိတျနှငျ့ သကျသစေရိတျထုတျယူရာတှငျ လှယျကူလငျြမွနျ ခြောမှစေ့ရေနျတရားရုံး၏ ထငျသာမွငျသာသော နရောမြားတှငျ ထုတျပွနျကွညောပေးရနျ အစီအစဉျရှိ/မရှိ၊ တရားရုံးမြားအတှကျ လိုအပျသော သကျသစေရိတျကို စနဈတကြ ဘတျဂကျြခမြှတျပေးရနျ အစီအစဉျရှိ/မရှိ ” မေးမွနျးရာ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတရားသူကွီးခြုပျ ဦးလှအေးက “သကျသမြေားအား စားစရိတျပေးခွငျးဆိုငျရာ နညျးဥပဒေ ၃ တှငျ ဖျောပွထားသော စရိတျကို ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့၏ ၆.၉.၂၀၁၈ ရကျစှဲပါစာအမှတျ၊ ၂၂/၁၆၈/အဖရ (၁၅/၂၀၁၈)ဖွငျ့ သဘောတူညီခကျြအရ ၁.၁၀.၂၀၁၈ ရကျနမှေ့စ၍ တဈနလြေှ့ငျ ငှကေပျြ ၄၈၀ဝိ/- နှုနျးဖွငျ့ တှကျခကျြပေးရနျ နောကျဆုံး တိုးမွှငျ့သတျမှတျခဲ့ပွီးဖွဈပါကွောငျး၊ နောကျဆုံးတိုးမွှငျ့ သတျမှတျလိုကျသော သကျသစေရိတျနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ထုတျယူရာတှငျ လှယျကူမွနျဆနျ ခြောမှစေ့ရေနျအတှကျ ၁၃.၆.၂၀၁၉ ရကျစှဲပါစာအမှတျ၊ ၁၂၁၂/တိုငျးဦးစီး/၂၀၁၉ ဖွငျ့ ရုံးအသီးသီးကို ထုတျပွနျကွညောထားပေးပွီး ဖွဈပါကွောငျး၊ ရနျပုံငှနှေငျ့ ပတျသကျ၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ်ဍာရေးနှဈအတှကျ သကျသစေရိတျအတှကျ ငှကေပျြသိနျး ၁၀၀ ကို ခထြားပွီးဖွဈပါကွောငျး၊ သိနျး ၁၀၀ ခထြားပွီးနောကျ သကျသစေရိတျ ၄၈၀၀ ဖွဈသညျ့အတှကျ ထပျမံတိုးမွှငျ့ပေးရနျ ဖွညျ့စှကျရနျပုံငှေ တောငျးခဲ့ပါကွောငျး၊ ငှကေပျြ ၁၈၁၀၂၄၀၀ (တဈရာရှဈဆယျ့ တဈသိနျးနှဈထောငျ့လေးရာကပျြ) ကို ထပျမံဖွညျ့စှကျ ဆောငျရှကျထားပွီး ဖွဈပါကွောငျး၊ သကျသစေရိတျအား ရုံးတိုငျးတှငျ ထုတျပေးနိုငျရနျ စီစဉျဆောငျရှကျ ထားပါကွောငျး၊ လိုအပျလြှငျလညျး ဖွညျ့စှကျရနျပုံငှဖွေငျ့ ထပျမံတောငျးခံမညျဖွဈပါကွောငျး” ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့ပါသညျ။ ဆကျစပျမေးခှနျးအနဖွေငျ့ တရားရုံးမြား၏ ထငျသာမွငျသာသော နရောမြားတှငျ သကျသစေရိတျကို လငျြမွနျစှာထုတျယူနိုငျရနျ အတှကျ ကွညောပေးရနျ အစီအစဉျရှိ/မရှိသိလိုပါကွောငျး မေးမွနျးရာ တရားသူကွီးခြုပျက ၁၃.၆.၂၀၁၉ ရကျနကေ့ ရုံးအသီးသီးကိုစာထုတျထားပွီးဖွဈပါကွောငျး၊ ရုံးအသီးသီး၏ notice Board တှငျ ကွညောပေးလိမျ့မညျဖွဈပါကွောငျး ပွနျလညျ ဖွကွေားခဲ့ပါသညျ။
Previous မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော ရွှေလှေချောင်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းပြီး အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားပါသဖြင့် ချောင်းမှာ ရေစီးရေလာပိတ်ဆို့နေပြီး ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်တူးဖော်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေပါသောကြောင့် ရွှေလှေချောင်းအား ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသနည်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်း
Next တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ချောင်းများ၊ မြောင်းများ၏ အကျယ်အဝန်းဧရိယာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်၊ အစီအစဉ်မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို မေးမြန်း
LAzMnu http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
on my Facebook. Thanks again foragreat post! https://inveska.ca/differences-entre-courtier-et-agent-dassurance/
w3fu4S https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
I simply wanted to give youaquick heads up! Besides that, wonderful blog! https://www.myleisurelounge.com/collections/womens/Leisure-Wear
VdA77n http://xnxx.in.net/ xnxx videos
on my Facebook. Thanks again foragreat article! https://inveska.ca/types-dassurance-vie-sans-examen-medical/
UQeL2M http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
Keep up the great works guys I?ve incorporated you guys to my own blogroll.| https://constructionlabrie.com/quest-ce-quun-projet-cle-en-main/
the same page layout and design. Great choice of colors! https://www.salondeauville.com/spring-cleaning-for-the-skin-2020/
Thanks again foragreat article! https://en.mmeco.ca/blogs/news/affordable-cloth-training-pants-the-mama-knows-review
information for my mission. https://www.canadafloorsdepot.com/vinyl-flooring/
Greetings! Very helpful advice within this post! It?s the little changes that make the most significant
changes. Many thanks for sharing!| I absolutely love your website..
Please reply back as I?m attempting to create my own personal site and
Thanks again foragreat article! https://www.tailoredsuitparis.fr/produit/costume-gris-anthracite-en-laine/
shared this on my Facebook. Thanks again foragreat post! https://cabinetthibeaultcpa.ca/contact-2/
Thanks again foragreat post! https://cabinetthibeaultcpa.ca/en-CA/contact/